कस्तो होला ‘हाउडे’ हरुको कथा ? (भिडियोसहित) – Peacepokhara.com
कस्तो होला ‘हाउडे’ हरुको कथा ? (भिडियोसहित)
पोखरा ३२ जेठ । नेपाली फिल्म ‘हाउडे’ले आफ्नो प्रचार अभियान शुरुवात गरेको छ । सामाजिक संजाल यूट्युबमार्फत प्रोमो सार्वजनिक गर्दै फिल्मले प्रचारलाई तिव्रता दिएको हो । सार्वजनिक प्रचार सामाग्रीमा ‘हाउडे’को जीवनशैलीलाई चित्रित गरिएको छ ।
आठौ डि सिने अवार्ड आज, सिने कलाकार सबै पोखरामा
सिनेमाको सुख दुःख – फेवा किनारमा गौरी मल्ल, रेखा थापा र ऋचा शर्मा
peacepokhara 01 Feb 2016
झरना बज्रचार्यको लगन गाठो कसियो
peacepokhara 15 Mar 2015